I-GPS yeMephu yeMephu eyi-6, ukuqhubekeka kwedatha-iGeofumadas
Ikhaya/cadastre/I-GPS Imephu ye-Mobile 6, i-post-processing data
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlulileyo esizibonayo indlela yokubamba idatha Ndikunye neMappa Mapper 6, ngoku siza kuzama ukuqhubekeka emva kokusebenza. Kule nto kuyacelwa ukuba kufakelwe iOfisi yeMephu yeMephu, kule meko ndisebenzisa inguqulelo engu-2.0 eza kuthenga izixhobo.
Indlela efanelekileyo yokusebenzisa le prolink, nangona ukuba idatha igcinwa kwimemori yangaphandle, kusebenza ngakumbi ukususa ikhadi le-SD kwaye uthathe iifayile ezivela apho.
Ukulayisha idatha kwi-Mobile Mapper Office.
Ngaphambili bendichaza ukusebenza kweefomathi ezahlukeneyo, yonke idatha igcinwe kwiifayile ze-. ubenakho ukuba nezendlalelo ebeziqwalaselwe. (Njenge-gvSIG .gvp)
Ukuyilayisha kwi-Mobile Mapper Office, ikhethwe kwiqhosha elihlaza okwesibhakabhaka.
Ukuba awufuni ukukhuphela iphrojekthi, unokwenza enye entsha ngokukhetha "Nuevo"Emva koko ulayishe iindawo.
Njengoko unokubona kumzobo ongentla apha, kwicala lasekhohlo ungacima okanye uvule iindawo .shp, ngelixa ekunene ungatshintsha ukuzaliswa okanye umbala wemibala yombala.
Ukuthunyelwa kweposi kwenkcukacha.
Ukulayisha idatha emva koko, iqhosha liyasetyenziswa Yongeza idatha eluhlaza, esinokukhetha ngayo idatha ye .grw egcinwe yiGPS. Ezi ziboniswa kwicandelo elingaphantsi kwiphaneli, zombini iiyure zokuqala kunye neeyokugqibela.
Ukulayisha idatha yereferensi, iqhosha elilandelayo lisetyenziswe, elivumela, ngakwesinye icala, ukulayisha idatha efumanekayo, njengale:
Idatha ebomvu kwifomati ye-Ashtech (b *. *)
RINEX idatha eluhlaza
Olunye ukhetho kukukhuphela idatha kwiwebhu, ukuba sinonxibelelwano lwe-Intanethi. Apha kunokwenzeka ukuseta inani lezitishi okanye iikhilomitha ezijikeleze; emva koko inkqubo iqala ukukhangela izikhululo ezinedatha ekhoyo ngezo yure sifake kuyo ulwazi.
Kuhamba, khangela i-ftp ye-RINEX yedatha ye-NOAA's Cors izitulo, ngokuqinisekileyo e-United States okanye eSpain kuya kwenza izinto ezimangalisayo, njengoko kukho ezinye izitishi ezikufutshane ezisebenzela ulwazi kwi-intanethi.
Jonga ukuba ngokunika ukhetho lwezitishi ezi-7, iseva ye-IGS eSan Salvador indichonga, ndicinga ukuba ngumncedisi we-CNR okwiikhilomitha ezili-168. Kukwakho neeseva ezimbini eGuatemala kunye naseNicaragua ezimbini, umahluko wokuba ziikhilomitha ezingama-242 kunye nama-368 kude. Konke ukuthatha idatha rhoqo kwimizuzwana engama-30, kucacile ukuba akukho nanye yale migama eyamkelekileyo kwimisebenzi enzulu, idatha evela kwisiseko esisondeleyo iyafuneka.
Emva kokuba ukhetha owokukhuphela, ngoko sikhetha kwaye cinezela iqhosha Ukukhuphela. Apho ungabona ukuba isikali sexesha sihambelana njani nedatha, nje ukuba kwenziwe oku kufuneka ucofe iqhosha Qala inkqubo, kwaye ulindele ukuba unyango luphele.
Jonga lo mzekelo, yindawo yokupaka ilinganiswe amatyeli amane, imigca eluhlaza okwesibhakabhaka ihambelana nophando kusetyenziswa isibhamu rhoqo emva komzuzwana omnye. Oonxantathu bahambelana nolwazi lokwenyani, oluthathwe ngesixhobo se-Promark ngokuchaneka kwemilimitha, kwangexesha elifanayo.
Xa wenza i-postprocess, jonga oko kwenzekayo, olu lungiso lulungelelanisa into egciniwe kwi-GIS, okanye ifayile yefomathi, eguqula idatha yayo yejometri, kodwa kungekhona idatha yayo egcinwe kwi-dbf.
Kuyathakazelisa ukuba umgama olinganayo ngaphandle kokucwangciswa kweposi ungaphantsi kwemitha enye, ukuba uthathwe ngamaxesha alinganayo. Kodwa eyona mpazamo iphakathi kwe-3 kunye ne-5 yeemitha, xa kusenziwa ukuthunyelwa kweposi kuyehla ukuya ngaphantsi kwemitha enye.
Akulunganga kwiqela elihamba ngaphantsi kwe-US $ 1,500 (i-Mobile Mapper 6) Umzekelo wesibini uthathwa kwimithambo khutshiwe kwiphepha leMagellan. Ukucaciswa, xa uthenga iqela lale nto, kuya kufuneka ubuze ukuba ukwenziwa emva kokusebenza kuyenziwa, njengoko kuhlawulwa ngokwahlukeneyo.
mənim adım Polandadan olan monika lezka. Kredit almağımda kömək edən cənab muller Philipə təşəkkür edirəm. Artıq üç aydır ki, borclarımı ödəmək üçün kredit axtarıram. Görüşdüyüm hər kəs aldadıldı və nəhayət cənab mullerlə tanış olana qədər pulumu götürdülər. I-Mənə 20 iidola zedola kadem verr bilərdi. O da sizə kömək edə bilər. Bir neçə həmkarımın da köməyinə çatdı. Maddi yardinma ehtiyacınız varsa, xahiş edirəm şirkətinə e-poçt göndərin: (muller_philip@aol.com) Düşünürəm ki, okanye sizə kömək edə bilər. Mənə kömək etdiyi üçün kömək üçün onunla əlaqə saxlayın. Mənə qarşı xoş niyyətini yaymaqla bunu etdiyimi bilmir, amma aldatmacalardan yaxa qurtara biləcəyimə, təqlid edənlərdən ehtiyatlanmağıma və düzgün kredit şirkəər Budur, qanuni və vicdanlı bir şəxsi borc istəyənlərə həvəsləndirici sözləri.
Kuya kufuneka uyibuyisele kwakhona inkqubo. Ndiyaqonda ukuba iphepha lomboneleli kufuneka likhutshelwe.
Elías Garduza uthi:
Mhlobo wam othandekayo, isixhobo sam esiphathwayo seMaphu esiselfowuni asinayo “i-MobileMapper Field”, kuba omnye woogxa bam kubonakala ukuba uyisusile isoftware kwisixhobo. Kule meko, ndingenza ntoni ukuze iqela lam libhalise ulungelelwaniso kwaye lenze iipolygons.
uncedo onokundinceda ukuba ndibeke njani i-MM6 yam izicwangciso eziphathekayo
uncedo onokundinceda ukuba ndibeke njani i-MM6 yam ulungelelaniso lwe-UTM kwaye ukhangele imephu
Umhlobo olungileyo kusasa, ngaba uya kuba nomnene kunceda undincede nge-200?
kuba iifayile ezivelisiweyo zenziwe ngolwandiso .csv kwaye andinakho ukuzisebenzisa kwisisombululo se-gnss ...
Ngaba uyifake idatha kunye ne-6 mobile mampper?
Ezi nkcukacha azikwazi ukuphinda zenziwe emva koko, njengoko ndiyiqonda ukuba le fowuni ayifaki into ebomvu efuna ukusetyenziswa kweposi.
Molo usuku oluhle. Ndenza umsebenzi wasemva ngokukhuphela iifayile kwifomathi ye-rimex kwi-intanethi kwaye xa ndizisa inkqubo yam ye-maper 6 indixelela ukuba: "xa kusenziwa ifayile ye-GRW, akukho vector ifunyenweyo ehambelana neefayile zemilo imephu" nangona ukuba ixesha liyahambelana.
Omnye umbuzo ngowokuba xa ndisebenzisa inkqubo yam ye-maper 6, kwaye ndithi "yongeza idatha yereferensi ekrwada" ukuba ndiyakwazi ukuguqula izitishi ezivela ngokungagqibekanga xa ucofa "ukusuka kwiwebhu".
Akululanga kangako ukwazi. Qala ngokuvavanya umhla kwisixhobo kunye nomhla kwi-PC
i-MM10 yam ishiya ihluleka ukufumana isiseko sokubuyisela phambili.
I-MM yaice, khuphela iifayile .map, khuphela iifayile eziluhlaza, kodwa ungafumani iziseko.
Yintoni eyayiba yingxaki?
I-Orlando yaseJamani i-Oyuela Torres uthi:
Molweni Kwidolophu yam kuyimfuneko ukwenza ubalo kwemithi ezidolophini kweli kubalo kukuba ukwenza itheyibhile yomba ngamnye kunye 47, baba phakathi kwawo. umfanekiso (umfanekiso), georeferenciacion, ubude, kunye nabanye ukuba ihlathi ubuntu, apho izixhobo ukuncoma nam lo msebenzi, kucacile ukuba le nkcazelo iza ekhwele umfanekiso satellite. enkosi impendulo yakho.
Molo Dario. Imibuliso eColombia.
Imephu yeMephu eyi-10 ngaphandle kokucwangciswa kweposi kufana nesikhangeli, ngokuchaneka kweemitha ezi-2. Nge-eriyali awuyi kuba nophuculo.
Ewe, ungasebenzisa i-Promark 3 yesiseko, kwaye kunye nalokhu kulandela i-MM10 idatha.
Ndandingakwazi ndixelele ukuba kunye accuracies this'd ngcono, Ngokoluvo lwam akukho, le accuracies alingana kodwa Promark3 mfono Mapper 100.
Kuxhomekeka ekubeni yintoni umdla wakho, endaweni ye-MM10 + i-eriyali ndingakucebisa ukuba uhambe ngcono kwi-Mobile Mapper 100, evelisa ukuchaneka okungaphantsi kweesentimitha ezingama-50 ngaphandle kokuphinda kwenziwe emva kokuba sele ithathe i-eriyali ebandakanywe ngaphakathi. Ngokwenza umsebenzi emva kokuphantse ube kukuphantse kube yimilimitha.
Ndiyicinga ukuba uyibone le nqaku, kodwa ndiyihlaziya.
G. EBUSUKU YOKWENZA A omncinci UKUDIBANA bacetyiswa kanye ukuba BUY UZIPHETHE KAKUHLE Ukufezekisa PROMARK 3 ULWAZI (GPS waba POST enye kuphela asingenise BASE WITH A 😯 KMS) Ngoko wenza baze bazuze iziphumo KAKUHLE kuhlolo YAM. Ukususela oko ndithenga A MM Lei 10 KUNYE XANA postprocessing KUNYE BASE WAM PROMARK 3? Ndandifuna ukukhawulezisa UMSEBENZI YAM (NE PROMARK 3 kufuneka A SEENGONGOMA WOBUNCINANE 2,5 IMIZUZU) kananjalo ukuba IINGXAKI uqine (A NOKUXHATSHAZWA IF waphazamiseka) PHI INGCACISO efanayo MM 10 NGAPHANDLE NGEMALI-eriyali kunye nokulityaziswa Ngaphantsi nje IXESHA IN IMIBUZO? KUNYE uyayenza PM 3 postprocessing? Enkosi ngentsebenziswano yakho.
EDINSON RAMOS ACEVEDO uthi:
ukuba benza njani kunceda ukuba uthathe i data intsimi postprocessing uze phantsi kwe data RINEX lwenkqubo post andinako sukuphazamisana ngeengcamba nam kungakhokelela kukucacisela Ukubonga kwenziwa njani
UJan Carlos de Xalapa uthi:
Isikhululo esiseduze ukuya eGuanajuato yiYunivesithi yaseGuanajuato, enye elandelayo kwi-144 km yiAguascalientes evela kwi-INEGI
Le nkqubo ivala xa ulayisha iifayile ngeenguqulelo ze-Windows onayo ukuba i-VISTA iyitshintshe ngokukhawuleza, kwiifestile 7 isebenza kwimodi yokudibanisa.
ekuphela kwendlela yokulinganisa imigama kwi-mobilemmaper kukuma kwelinye lamanqaku enza umgca kwaye uyicele ukuba "yihambe" kwenye indawo apho sifuna ukwazi umgama. Ayinayo imowudi ye-ODOMETER.
ukuba udwebe i-ROUTE, kuba idonsa umgca kwaye iyindlela yakho kwaye ibonakala kwiGoogle kunye nenyaniso elula yokuthumela kwi-KML format
Ndingayifumana njani indlela yokuhamba ngeemephu ze-6?
-Ukuba ukwazi ukusebenzisa iimephu zeGoogle, ngaba kuyimfuneko ukuba i-GPS ixhunyiwe kwi-intanethi?
Asiwuqondi umbuzo wakho, ukuba uzichaza ngcono ...
ingelosi yaseMiguel uthi:
umntu unokundixelela ukuba usebenze kunye neemephu, ndifuna ukufaka iinkqubo ze disk nokufaka iinkqubo kwi-mapper ephathekayo. Ndizama ukuyisebenzisa kodwa iimephu azibonakali.
Franco avila uthi:
Ukubingelela kungandibonisa nge-6 imephu yomnxeba, ndingayifaka njani i sixhobo ukuba ndilingise imitha edibanisayo kuphela kwaye ndifuna ukufaka indlela odometro graisas
Ayikho i-Map Map 7, kukho i6, 10, 100.
Ayifanelanga, kuyonakala ukuba yonakele. Zama ukuyifaka kwakhona.
Venustiano Martinez Lucas uthi:
U-HELLO, UKUBA UFUNA UKUHLOLA IINKONZO ZOKUPHUMA KWENKQUBO, INKQUBO YOKUPHATHA I-MISTAKE NE-IT CLOSES?
felix cediel alcantara uthi:
I-GPS Imephu ye-Mobile 7, emva kokuqhutyelwa kwedatha, ndilindele uxhulumaniso lwakho.
Imeyili yam: topografizozosparaagu@gmail.com
Ifowuni: I-3134521866 IKOLOMBIA- AMERICA AMASIKA.
Jose Luis Perez uthi:
Ndingayenza njani i-postprocess esekelwe kwidata enikezelwe yi-RGNA yaseMexico.
ULuis Armando uthi:
Ukubulisa ndifuna ukucacisa ukuba ngaba oku kulandelayo.
I indawo e Guanajuato, Mexico, ziqhube uphando kunye Mapper mobile 6 ingxaki kukuba postprocessing zama ukufumana izitishi ezikufutshane kwi web kwaye malunga 300 km ikufuphi kunjalo kwi-website ye-RGNA of data INEGI ukusuka kwisikhululo ngasinye kweli lizwe kwaye zama ukusebenzisa le data kwi software postprocessing kundixelela ukuba ifomathi yefayile, ndiya kuyenza kweli mzekelo ukusebenzisa data RGNA asibonakali? Kwaye ke dibanisa la efanayo kuphando yam?
o Ngaba kuyimfuneko ukulungisa ifom yefayili ekhutshwe kwi-RGNA?
Ngaba kukho umntu onokuphendula?
Imibuliso, enkosi ngokwabelana ngolu lwazi ...
Ndinombuzo, kwi-MM xa ndidala umsebenzi omtsha
Ndifumana iindlela ze-2 enye ukusebenzela njengemephu kwaye enye i-dxf
Kukhetho lweenkcukacha ulwazi oluqokelelweyo alukwazi ukuphakamisa,
kodwa kwifom ye dxf ewe,
Ngokwalento endiyifunayo kule ngcaciso, inkqubo yeposi iyasebenza kuphela kwiifomati zeemephu?
Ngaba ndingakwazi ukufumana idatha yokuphakama kwifayile yeepapu?
Ndivele ndizame ukuthumela idatha kwi-dxf ukusuka kwibalazwe yehlabathi kwaye ayininika le datha (z)
Ngoko ukuchaneka kwam kuya kuba yinto endiyiphosayo kunye nokusetyenziswa kwe-antenna xa i-work earning it as dxf.
Ndiyabonga kakhulu ngenxa yezimvo zakho kwangaphambili.
I-MobileMapper 10 ayinakuba sisiseko. Kodwa inokuba yirver, idatha egcinwe yiMM10 ikwifomathi yefomathi, equlathwe kwifayile yemephu ebabiza njengesalathiso; ezi zikhutshiwe kwaye zenziwe ngotshintsho emva kokuthelekiswa nezo zithathwe yi-MobileMapper 100, Promark okanye enye kwezi zingasentla.
Idata esekelwe kwisiseko se-GPS yifom ekhusiweyo (.grw)
Ukuhlaziywa kwangoku Ifowuni yeMapper Office sele sele ixhasa idatha yokubuyisela i-MM10
I-MM10 isebenza njengesiseko?
Njengokuba ngaphantsi kweefayile kunye naluphi ukongezwa kweqela lokubhula ukwenza inkqubo yeposi?
Andinayo enye inkqubo efakwe
I-GPS yeprogram ye-GPS yi-COM0
kwi-COM1 hardware port
Ndiyabuza, unayo enye inkqubo yokufikelela yeGps njengeMobileMapping okanye iArcPad efakiweyo? Ngokuya wena kufuneka uvavanye ukuba ingxaki ibanzi
Yiyiphi ichweba oye uyiqwalasela?
Awunayo ifowuni yangaphandle eqwalaselwe kwiinketho?
UDon Geofumadas unokunceda ngento enceda nceda.
NdineMM6. Ndinekhampasi elungelelanisiweyo kunye nomqondiso olungileyo wesathelayithi kodwa xa ndiqala inkqubo yeFowuni yeMephu yeMobile ifestile ibonakala indixelela ukuba ayinakunxibelelana neGPS. Ndiyilungisa njani le mpazamo?
Ewe kunzima ukwazi. Kuya kuba yimfuneko ukuqinisekisa ukuba omabini la maqela ayeqokelela idatha ngaxeshanye, ukuba ixesha lalikwimeko efanayo, ukuba ingqikelelo yayifana, ukuba isiseko sasinokwamkelwa kakuhle.
Nceda, ndifuna ukwenza emva koko ndifumane impazamo ethi:
"Xa kusetyenzwa ifayile xxxxxxxx.grw akukho vector ifunyenweyo ehambelana neefayile zemilo yemephu."
Ngokuqinisekileyo ndithathile yonke into ebangelwa ukuhlola kwaye andiyazi into engafanelekanga. Ukulawula umgangatho kukushiya ngaphandle kwamaxabiso. Kodwa njengoko ndenzayo ukuba ndichaneke ngaphantsi kweemitha.
Olunye umbuzo, ukuba ndifuna ukwakha izitalato, iindlela apho ijubane kufuneka lihambe khona, ukwenzela ukuba ukuchaneka kukuhle kakhulu.
Molweni nonke, ubone ukuba kunokunceda, athenge 6 mibile Mapper, kodwa akazange abe ikhowudi yam, Ashtech na miscommunication kakhulu elisombulula kum, nina abathile Umthengisi ukwazi apha e li iMonterrey oza kundinceda okanye nayiphi na yeededes
I-Mobile Mapper Pro ayithengiswanga, kodwa sebenzisa enye ikhebula le-CX esasasazwa kuyo nayiphi na isitolo seMagellan / Ashtech / Topcom, uyifumana ne-Ashtech distributor ezweni lakho.
URonald ZS uthi:
g! Ungandixelela ukuba loluphi uhlobo lwesixhobo sokudibanisa intambo esetyenziselwa imephu yeselfowuni kuba isinxibelelanisi sentambo ye-eriyali ye-promark3 sikhulu kwaye asihambelani. Ndingayithenga phi ukuba unolwazi.
Ndiyaqonda ukuba uncedo lufunyenwe yirver, kuba i-eriyali kukuphucula umgangatho wolwamkelo xa ujongene nezithintelo, ngelixa isiseko singenayo le ngxaki kuba uyishiya kwindawo ecacileyo; ukongeza, umgangatho wayo wokwamkela ulungile. igcina kwaye iqokelele njengoko itshintsha iisathelayithi. Uncedo oluncinci olongezelelekileyo alufumanayo kwi-eriyali.
Ndine-mapps mapp map yesibini yombuzo wam kukuba unceda kokubili ukuchaneka kwe-antenna yangaphandle.
ukuba ndiyishiya enye njengesiseko esingashiywe ngaphandle kwe-antenna yangaphandle kodwa indlela echanekileyo ngayo ukulungiswa eyenza idatha eluhlaza ye-GPS esebenza njenge-rover. Okanye ukuba akunakwenzeka ukudibanisa i-antenna yangaphandle kwi-GPS ehlala isiseko.
Enkosi uJuan Carlos. Igalelo lakho lixabiseke kakhulu.
Okokuqala kukubongelela ngeblog yakho ibonelela kakhulu, kodwa ndingathanda ukucacisa.
EMexico, ezimbini iintlobo ze-mobileMapper6 zithengiswa kunye kwaye zingenakho ukuqhutyelwa kwithuba emva kokucwangciswa kwesikhokelo, ukusetyenziswa kwe-post post processing xa kuthengwe emva kokuthengwa kwezixhobo kunokubiza, njenge-500 usd.
njengoko bathi omnye mm6 ayikwazi kusekwa eMexico ufuna ukudibanisa kuwo RGNA INEGI, usebenzisa iqhosha ukufumana iinkcukacha ngaye evela website, kodwa abenzi efanayo (Magellan) musa sicebisa ukuba phakamisa yakho postprocessing abe ezikude kakhulu ukusuka 200km, ndihlala Xalapa, Veracruz kunye nesikhululo sisondeleyo kwisixeko Mexico kwi 227km moya ngoko isixeko yam kobubanzi.
I-eriyali uphucula ulwamkelo (onceda inani Hewana kwaye kuhle kakhulu kwiisayithi bavalelwe), kodwa akunyanzelekanga ukuba ichanile kwiindawo ezivulekileyo, ndithi kuni ngenxa yokuba e Mexico, a guy kwi internet othengisa eriyali ukuba map60cx of i-garmin kwaye ithi nangalesi sixhobo siphequluli sisisetyenzana ngaphandle kwesidingo sokwenza i post post okanye i-2 i-receiver, ngoko ke yintoni i-omnistar kwimarike, ndiyazibuza.
omnye umntu Oaxaca Qaphela oko uthi kuye, kuqala nge GPS angafunekiyo POLYGONAL ukuba izikhululo abangabancedani ukuba abeke isikhululo lilonke kwaye iziza ukuba angakanani na kwisikhululo iyonke, kodwa kuyabonakala ukuba ucinga hlanganisa, iliso! ayikhuthazwa ukuba GPS kwimithana buhlanganiswe kunye isikhululo iyonke millimetric, kwanele ukuba ukukhumbula ukuba isiphoso iGPS ukuphakama kwayo, kuba 1.5 amaxesha 2 XY.
Ekugqibeleni kumntu ofuna ukwenza UKUFUNA, i-mm6 ihambelaniswe ngokukhawuleza, emva kokuqhutyelwa inxaxheba ngokuchanekileyo kwi-SBAS, oko kukuthi imitha.
Ukubuliswa kwe-xalapa veracruz mexico.
Molo Pablo, ndithumele i-imeyile yakho kummeli weAshtech / Magellan kuMbindi Merika oya kuzama ukukunceda. Kuya kufuneka umnike inombolo yesiriyeli yezixhobo.
Sawu, nceda undixelele ukuba ungayifumana phi imephu ephothiweyo kunye nekhowudi yokuthunyelwa kweposi kwi-MM6 yam. Akuzange kwenzeke apha eColombia. Bandixelela ukuba kufuneka sihambise izixhobo kumakhaya aseMagellan. Ngaba kuya kuba kukuba andinakuzilawula kwaye ndizenzele mna? Ngaba unxibelelwano e-US onokundinceda?
Ndiyabulela ngoncedo lwakho.
Masibone, ndisadidekile kancinci. Unabo 2 bebonke? Enye yazo isebenza kakuhle kwaye enye into ayilunganga, njengoko ndiyayiqonda.
Imephu yemephu eyi-6 ayinakuphucula ukuchaneka kwayo ngokwayo. Ifuna esisiseko, kwaye esisiseko ayinakuba yimephu ehambayo eyi-6, kodwa enye endikhe ndayidwelisa ngaphambili.
Enye indlela yokwenza i-post-process processing, engangqinelani nolwazi lwalowo olusebenza njengesiseko usebenzisa i-Rinex yolwazi okanye abo bafumaneka kwi-intanethi, njengoko kuchazwe kule post. Iya kuxhomekeka kwindawo okhoyo kwaye ukuba iZiko leLizwe lakho linedatha ekufuneka ilandelwe emva kwenkqubo.
Ndiyabonga ngegama lakho G!, enye i-GPS iyafana (ifunwa) i-6 imephu ephathekayo kodwa xa ndiyenza inzululwazi ayinikeli nantoni na, ngoko ingasetyenziswanga. Ndiyakwazi ukwenza iipoloni imigca kodwa ndiyazi ukuba banesiphelo esithile, ndingayandisa njani ukuchaneka kwabo? Ndineemephu eziphathekayo kuphela zokucwangcisa oko nangona zenza apho bazithenge khona. Ngaba ndiza kufuna inkqubo eyongezelelweyo? . mbulelo ngenxa yeengxelo
Imephu ye-GPS yemephu eyi-6 ayinakusebenza njengesiseko sokulungiswa kweposi, kuphela njenge-rover. Ukuphucula ukuchaneka, kuya kufuneka ubenayo exhasa ukusebenza njengesiseko:
Oku kulandelayo kunokusebenza njengesiseko: Imephu yeMapp Pro, iMephu yeMephu ye-CX, i-Promark 100, i-Promark 200, i-Promark 100, iMephu yeMephu eyi-10 okanye iMephu yeMephu eyi-200.
Ke into oyenzayo kukuba izixhobo ezizakusebenza njengesiseko, uzilungiselele ukuba zisebenze ngolu hlobo. Kuya kufuneka babe kunye nexesha kunye nomhla omnye, kwaye baqala ukufaka idatha ngaxeshanye; Isiseko kufuneka sibe kwindawo emiselweyo, kwaye kuyacetyiswa ukufaka idatha malunga nemizuzu engama-20 ngaphambili kunye nemizuzu engama-20 emva kovavanyo olwenziwe yirver.
Ezi mobile Mapper 6 unako ukukhonza wena njengesibhadubhadu, ukuze xa ugqibile zifake idatha, ukopisho kunye postprocesas athathwe ukuze ne mm6 nxamnye kwisiseko esingatshintshiyo, esebenzisa mfono Mapper Office.
Undixelele ukuba unomnye olinganayo, onjalo? Liliphi uphawu? Icacisa ngakumbi ukuba kungani na ukunika umlinganiselo kwaye ukuba uthetha ngelinye iqela okanye rhoqo nge mm6.
Ndineemephu ezimbini eziphathwayo 6, liqela elihle. Umbuzo xa ndenza uphando, ndiwonyusa njani ngokuchanekileyo? Ndinenye i-gps ngokufanayo kodwa ayindiniki mlinganiso kuphela kulungelelwaniso lwejografi. Ndingavuya naziphi na izimvo
alberto rguez .. uthi:
Molo kakhulu mr geo, ndicela undicacisele ngenkqubo yokwenza uphononongo lwethopu .. nge-mm6 andazi kuba incwadana izisa kuphela iziseko endifuna ukumakisha kuzo, ndiyazi i-azimuth yesihloko ngasinye kunye nokudibana, ndiyabulela ingqalelo yakho kwangethuba…. i-tabasco mexico ………………
ESTUARDO TORRES uthi:
UKUQALA NGOKUQALA NGOKUBA WAKHO OMSEBENZI
'XA NJENGOKO NDINOKUQHUBA INDLELA YOKUHLALA, NDISELE NDISELE NDIPHUMELELA UHLOLO OLWENZIWE KWI-COORDINATES.´
INDLELA NGOKUBHALWA NGAYO UKUBHALWA KWEMIQUBO YENQUBO NEEMPENDULO ZEMPILO 6
kuba eColombia ndikunika ithuba lokukhangela izitishi kwaye ungazikhangeli, kuya kufuneka uqwalasele enye inketho.
Sawubona Irving, kwisiphi isixeko kunye nombuso waseMexico okhoyo.
Molo ndiyathemba ukuba uhleli kakuhle bendibukele iforamu yakho kwaye ilunge kakhulu ndinomntu othanda i-MOBILEEMAPPER 6 kwaye ndicinga ukuba umntu othile e-ofisini udlala ngayo kwaye ndiyicimile. UKUBA NDIYITENGISILE KODWA ANDISABEKHO KWI-ISE kwaye NDIFUNA UKUNXIBELELANA NENKXASO KWE-MAGELLAN KODWA ANDINAKUFUMANA OLUNYE UQHAGAMSHELWANO LWE-MEXICO.
URaul, ukuba uthenge i sixhobo esitsha, kuza i-DVD eyenza inkqubo inyathelo ngesinyathelo kwividiyo.
mnumzane mr. geofumed
Okokuqala ndivumele ndivuyiswe kwaye ndikubulele ngolwazi osiphayo. Ndingayifumana Magellan GPS promark3 kunye software post-processing na GNSS SOLUTIONS, ukuba ngobubele undixelele yintoni na inkqubo post-processing of ulwazi oluqokelelweyo entsimini.
Imibuliso, ungandixelela eyona ndlela yokusebenzisa iMobileMapper Pro YAM NGOKUPHELELAYO kwinethiwekhi yombane? (Amaqhinga okanye ubuchule, iingcebiso) Sele ndinayo yonke into ephepheni (uququzelelo olucwangcisiweyo lwamaphuzu) kwaye ndifuna ukuyifumana emhlabeni.
Ndiyabulela ngoncedo lwakho
Kutshanje ndiye ndathenga iMM6, kodwa yaphazamiseka ngesoftware yeMobileMapper kwaye yaqala kwakhona ngokungacwangciswanga, emva koko ndafaka iArcPad 7.1.1 kwaye iqhubeka nokwenza izinto ezingaqhelekanga…. Umntu ebekwayinto enye? Sele ndiyithumele ukuba iqinisekise ngomboneleli ...
Nibingelela, nceda umntu onokuncedisa
xa uqala ulungiso lwenkqubo yenkqubo ibonisa impazamo ebonisa ukuba i vector ehambelana neefayile zemilo ayifumanekanga kwaye ukulungiswa kwe-lq akwenziwa
Ndiyathemba ukufumana uncedo, mbulela
Kufanele uqhagamshelane nommeli osemthethweni waseMagellan okanye iAshteki kwilizwe lakho, kwaye unokukunceda.
Hi ndlela leyi, liliphi ilizwe okulo? Amazantsi emelika?
umhlobo vera ndibeke password, GPS kunye ezilungileyo e utilisado njengoko iinyanga 3 kwaye ukuyisebenzisa xa andithanga ndikukhumbule igama lokugqitha kunye nencwadi password mna ezilahlekileyo, i-GPS kuthenga package yaye onke amaxwebhu ezithenga , kungekhona njengokuba desboquiar ndiyathemba Kofuneka nindixhase
Ewe, andikhumbuli ukuba nalo mpazamo.
Umbuzo owongezelelweyo, ngaba akusayi kuba loo manqaku aphindaphindiwe kwiiseshoni ezahlukeneyo?
Zama ukulanda idatha ngeeseshoni ezahlukileyo ukuze ubone ukuba le ngxaki.
Kuhle uMnu geofumadas, kuvela ukuba ngamanye amaxesha xa ndisenza ukudluliselwa kwi-Software ye-MobileMapper ye-Ofisi, oko kukuthi, ukukhuphela ifayile ye-MobileMapper Pro GPS kwi-PC, kuvela umyalezo othi: "AMAPHUTHA AMANINGI OKUBALA OKUQHUBEKAYO". Ndingayilungisa njani le ngxaki?Ewe, ekugqibeleni, xa ndiyamnkela, ibonisa uphando kodwa ngaphandle kwenketho yokuPost-process. Okanye kwimeko embi kakhulu akukho nto idluliswayo.
Yintoni enokwenzeka ntoni ???
Ndiyabulela ngoncedo lwakho oluxabisekileyo.
Ndiyaqonda ukuba ukuthenga kwakho kufaka i-diski, ukuze nge-ActiveSync ungabuyiselwa isicelo seWindows Mobile.
hernan contraras uthi:
Molweni nonke, quisera ukuze andincede kuba GPS yam mobile Mapper 6 kwaye ndifumana screen ukuba ucwangcise igama lokugqitha yaye andazi apho, njengokuba nyana wam wabeka lokugqitha kwaye khumbula, xa ndizama ukudibanisa kunye GPS ukuze pc I ukufumana Umyalezo olandelayo: Isixhobo sivaliwe. Ukuyixhuma kwesi sixhobo okanye ukuvumelanisa, yenza ukuqinisekiswa kwikhompyutha yakho.
ngoko ke kufuneka ndiyenze ntoni, njengokuba ndenza ukuvula okanye ukubuyisela kwakhona i-gps kwakhona, i-GPS iyinto entsha kwaye oku kwenzeka ngexesha lokuqalisa.
raymundo granados zavaleta uthi:
Ndingayifumana mm mm 6 pro kwaye kutshanje ezifunyenwe ufuna ukwenza postprocessing kodwa isikhululo file reference olwakha mm pro wadibanisa njengoko data ekrwada ukuba yobhekiso ziyaxhaswa, oku yenza iifayile ngolwandiso xxx.285 ucele kum ezahlukeneyo ukuba ndidibanisa njengokuba zonke iifayile *. * indixelela format ayaziwa, ndibe luleka
amaigos, ndiyakucela ukuba undikhokele malunga nezixhobo ondicebisa ngazo ukuba ndenze imilinganiselo yendawo ethe tyaba nethe tyaba, eyona ichanekileyo kwaye isondele kwiindawo zokwenyani, -ubungakanani bobuncinci kunye nemilinganiselo ephezulu-
Isiseko akufuneki sihambe, kwaye sinokuba naphina, kungenjalo kwindawo yokuphakamisa. Ngale ndlela uyibeka kwindawo ekhuselekileyo necacileyo.
Kunconywa ukuba uvule imizuzu ye-15 ngaphambi kokuba uqalise uphando kwaye ushiye i-15 imizuzu kamva, ukuze ukwazi ukuqokelela ukufundwa.
Sawubona uMnu. Geofumadas, ndikubulisa kwiCD. e-Oaxaca, ndikubulela ngokuxelela ulwazi lwakho
Lo mbuzo malunga nokuqokelelwa kweenkcukacha kunye GPS ezimbini izixhobo postprocessing baphakamise sedata iza ngaphakathi polygonal ivaliwe okanye ndisishenxise ukuthatha amanqaku ezithile polygon kwaye kwimeko wepoligoni open kwinkqubo yamanzi apho okusela zingafakwa kwi iyunithi isiseko
Makhe sibone ukuba ndiyiqonda kakuhle:
Umelwe ukuba ube namaqela amabini aphakamisa ngaxeshanye, elinye lawo kufuneka lichazwe njengesiseko, kunye nelinye njenge-rover. Ngale ndlela, omnye wabo uya kuqokelela idatha eluhlaza, kunye nolunye ulwazi olusisiseko.
Idatha eluhlaza igcinwa kwi-Job Mapper Job, ngoko ke ukwandiswa .mmj ngelixa iqela elikhulisa idatha njengesiseko, liya kubasindisa ngolunye ulwandiso kodwa xa usebenzisa Ifowuni yeMapper Office unako ukuwalayisha ukuba uphumelele emva kokuba bavumelana ngexesha lokubamba.
Ingaba umbuzo wakho, ukuba ukuba idatha ethathwa njengento epheleleyo ingaguqukela kwisiseko?
Kulungile kusasa, sr Geofumadas kuqala kokubongela ngomsebenzi wakho wobugcisa kunye nophando, kwaye siyabonga ngokusondla sonke esinomdla kwi-geomatics kunye nobudlelwane bakho bonke.
Ndingathanda ukuphendula umbuzo, ukukhuphela data evela Mapper mobile ubungakanani pro bayo .MMJ, ingcamango kukuba ukwenza processing post, ngoko ndifuna ukwazi option for Ifomathi yeengcombolo ukwazisa .grw esemajukujukwini data ekrwada ngexesha postprocessing, Enkosi atension edume zakho.
Ungayilanda kwiphepha le-Ashtech
Kulungile. Molo, ungandinceda ungandixelela ukuba ndingayithenga phi isoftware yokwenza imveliso, kuba iMM6 endiyithengileyo ayizanga nayo kwaye ayizanga neMephu. Bandixelela ngezinye zeekhowudi ekufuneka zifunyenwe ukufaka isoftware yasendle. Ndixakiwe Ngokwenene… ..
Ngokwenyani, i-Mobile Mapper Pro kunye ne-Promark3 inokudityaniswa kwenkcukacha ezithathiweyo nge-Mapper 6.
I-MM6 incedwa kancinci yi-eriyali yangaphandle. Umzekelo uthathwa ngaphandle kwe-eriyali.
Roberto Jaimes uthi:
Izibingelelo zaseMichoacán Mexico:
Okokuqala kukho konke ukuvuyiswa ngokuba ngumsebenzi wephepha lakho.
Ndineprogram yeMapper Map with key to post processing, ngaba kungenzeka ukuyisebenzisa ngokudibanisa ne-MM6? Ngaba ndiza kuba neengxaki kunye nesofthiwe phakathi kwabo? Yaye umbuzo wam wokugqibela kukuba ukusetyenziswa kokuthatha le datha efunyenwe yileyunithi njengoko izayo okanye ukuba iya kunceda ukuchaneka kwe-antenna yangaphandle?
Siyabulela iwaka ngenxa yokunyamekela kwakho.
I zintanda, abangabanini realisados ​​umsebenzi mobile Mapper 6 Magellan zitshekishwa presicion imitha, kuba liqela egqwesileyo kwaye ngoku hayi kuphela mapping mobile, kodwa imitha nePDA GPS.
Ewe, ixesha lokubamba linento yokwenza neemeko ezinje ngokubonakala okungalunganga. Injalo imeko yokuba usecaleni kwesakhiwo, isakhiwo esineglasi okanye iitrops.
Ukuchaneka endikuthethayo, yemitha kuyimfuneko yokubuyisela phambili, ayikho idatha ebomvu.
Kwiimvavanyo ndenze, kunye ngokutofwa 30 imizuzwana, kwaye kwiindawo ezisezidolophini (akukho amafu), kunye postprocessing mna baphumelela, phakathi cm 80 1.20 kunye imposiso iphiramidi.
Ingaba ixesha lokuthatha idatha lichaphazela ngqo ukuchaneka kwedata?
Ingqungquthela ethethwa ngaphantsi kwe-1m, ingayiphi na imilinganiselo kunye nayiphi na imeko? okanye kwezinye iimeko kunye neemeko ezifanelekileyo?